Sida loo yareeyo daaqadaha baalka menu-ka ee Mac | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo yareeyo daaqadaha baarka menu-ka ee Mac
Mid ka mid ah xulashooyinka aan ku heli karno macOS waa in la yareeyo daaqadaha, codsiyada ama qalabka leh guji laba jeer. Dareenkan, casharradan yar ayaan awoodi doonnaa yaree daaqadaha si ka dhakhso badan oo fudud.
Isticmaalayaal badan ayaa wali u adeegsada badhanka liinta tan tan wayna ka fududdahay inaad gujiso meelkasta oo cinwaanka cinwaanka ah si loo sameeyo. Marka aan aragno tallaabooyinka ay tahay inaan qaadno si aan u kicino shaqadan aan ka helno dhammaan noocyada 'macOS', kan ugu cusub iyo kan ugu da'da weyn.
Marka aan u dhaadhacno ganacsiga. Waxa ugu horreeya ee aan sameyno waa helitaanka Nidaamka doorbidista iyo mar gudaha ah waa inaan helnaa xulashada Dock:
Sida aad ku arkeyso sawirka kore waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo laga heli karo meeriskan iminkana waxaan kaliya xiiseyneynaa ikhtiyaarka koowaad ee kuwa hoose «Laba jeer guji barta cinwaanka daaqada si ...» Midkaan yar ee hoos-u-dhaca ahna waa inaan gujinnaa "Yarayn".
Hada markaan riixno meelkasta oo baarka kore laba jeer daaqadu si dhaqso leh oo fudud ayeey yareyn doontaa. Mar dambe lagama maarmaan noqon mayso inaad riixdo batoonka liinta si aad sidaas u yeelatid sidaasna waxaan ku noqon karnaa xoogaa wax soo saar leh Mac-gaaga Qeybta aan ku riixeyno, tusaale ahaan Safari, waa aagga saxda ah dhinacyada sanduuqa. url, gujinaya meelkasta oo baarkaan ah ayaa yareyneysa daaqada ilaa Dock-keena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo yareeyo daaqadaha baarka menu-ka ee Mac
Apple TV-ga soo socda ayaa diirada saari doona ciyaaraha wuxuuna yeelan doonaa kontorool cusub oo fog
Raadiyaha Rasmiga ah ee xilli ciyaareedkii labaad ee Qoraa Cirfiid